Nahoana ny E-skateboard Dia noraisin'ny Sizzling Ary ianao. - Jomo Technology Co., Ltd
Izany no marina tanteraka, rehefa hoe: tsy manam-paharoa ry zareo, misy ny mitovy karazana dia fantatra amin'ny anarana hoe IOS ao amin'ny tsena sahady. Ireo tanana-maimaim-poana herinaratra môtôna skateboard herinaratra azo nentina tany amin'ny iray tapitrisa toerana, tsy zava-dehibe izay niantso azy. Koowheel vaovao dikan Electric skateboard Kooboard: Izany no fomba lehibe ho an'ny tanora mba hiala voly sy niraharaha tamin'izany andro izany. Mitondra ny mahafinaritra ny skateboard, ataovy ho mora ny mampiasa ny toy ny maotera scooter, araka izay manome azy fanampiny kely ny swag. Electric Skateboard dia nifanizina amin'ny mahafinaritra sy manjary ny fialam-boly ny tanora maro firenena. Elektrika skateboard natao ary no niandohan'ny avy Koowheel marika ao Shina.
Vokatry ny, hoy izy ireo, fa ny skateboard tsy Travel fitaovana fotsiny ihany fa hanatsara ihany koa ny fiainan'ny olona iray amin'ny fomba tsara. Mety koa manovaova sy malama diany. Raha toa ianao ka eo amin'ny handrandraiko ho fomba fitaterana manokana izay afaka hitondra anao amin'ny toerana iray hafa, haingana dia tsy maintsy hifidy ny lamaody ny mpanjifa. Ampahany manan-danja ao ny kely saina fitaterana ambaratongam-pitantanana dia mahazo kamiao tiana mihoatra noho fiara manokana ho an'ny lafiny hampihenana zara raha fiantsonan'ny. Ny olona efa miely patrana, ny Kilonga fotoana, nanomboka amin'izao tontolo izao ny tena mahay mampifandanja ny fitaterana.
Koowheel Skateboards dia nanorina raha malemy fanahy sy mahery Mitondra ny smoothest niala teo. Nandritra ny fikarohana dia nahatsapa fa maro ny firenena any Azia dia efa tonga nirohotra ambony Electro-mivezivezy sy toa, araka ny orinasa lavitra, dia efa miatrika herinaratra môtô, hihevahevana birao sy ny - skateboards! Vatoaratra ireo efa mampiasa diso malefaka na tsininy sela sy ny zana-kazo miaraka amin maro tratra kosa mamaly ny afo na mitaingina. Fa tsy ny lafin-javatra hafahafa momba azy ireo-izay mety ho ny zava-misy fa mafana indrindra amin'ity taona ity ny fety valisoa mitana misambotra amin'ny afo. Ny zavatra voalohany Hitanao na oviana na oviana ianao no mijery ny entana vaovao scooter raha ny marina dia tsy misy, na ny banga, ao amin'ny Mazava ho azy fa ny milina. Ny Koowheel dia tena mahay mampifandanja Sinoa nanao scooter Izany vonona hantsaka fiteny maro samy hafa hoverboard noho ny lamaody famolavolana.
Post fotoana: Oct-19-2017